London Eye, tsy maintsy atao any London | Vaovao momba ny dia
Tanàna maro no manana zavatra mahaliana, eritreritra, natao ary namboarina miaraka amin'ny fomba fijerin'ny mpizahatany. Ohatra iray ny London Eye, ilay mahatalanjona ferris wheel an'ny renivohitra anglisy Avy amin'ny haavony no ahitanao ny fahitana ny tanàna.
Hatramin'ny nananganana azy dia fahombiazana izany ka raha mankany Londres ianao dia tsy afaka mijanona mihanika ny iray amin'ireo gondola ary jereo London avy amin'ny 135 metatra ny haavony. Ahoana ny fahitana!
2 Tsidiho ny London Eye
Ny kodiarana Ferris dia tsy zava-baovao. Zato taona mahery izy ireo ary maro ny kodiarana Ferris malaza any amin'ny tanàna hafa manerantany. Raha ny tena izy, na i Londres aza dia nanana kodiarana Ferris somary lava 94 metatra tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-1907, izay nopotehina tamin'ny XNUMX, saingy raha teo am-piasana izy io dia nitondra olona mafana fo maherin'ny roa tapitrisa.
Ny London Eye nosokafana ho an'ny besinimaro tamin'ny taona 2000 ary ny endrik'ireo mpanao mari-trano roa, Julia Bartfield sy David Marks. Taorian'ny fikarakarana ny fahazoan-dàlana an-tanàn-dehibe sy ny tontolo iainana ilaina dia natomboka teo amoron'i Thames ny asa. Nandroso ny fizarana ary niangona ho firafitra an-tanety ilay firafitra ary hatsangana amin'ny toerana farany.
Azo lazaina fa pan-European ny kodiarana Ferris anglisy: anglisy ny vy fa vita tany Holland izy, Alemà ny bearings, italianina ny tariby sy ny vera gondola, Czech ny axle, ny herinaratra dia Ny anglisy sy ny kapsily manokana dia novokarina tany Frantsa.
Tamin'ny fotoana nitokanana dia i Tony Blair ny praiminisitra, saingy na dia notokanana tamin'ny 31 Desambra 1999 aza izy io dia tamin'ny volana martsa ny taona manaraka ihany no nankafizin'ny besinimaro azy. SAINGY manao ahoana ny maso london? Ny kodiarana ferris manana kapsily miendrika oval 32, mafana sy voaisy tombo-kase, izay mihodina amin'ny herinaratra amin'ny manodidina ny boriborin'i Ferris. Samy milanja 10 taonina ny tsirairay ary maneho ny manodidina folo o boroughs ny Londres.
28 ny olona tafiditra ao anaty kapsily tsirairay, izay azo mipetraka na mijoro. Ny antsasaky ny iray manontolo dia mila antsasak'adiny, satria mihodina amin'ny 26 santimetatra isan-tsegondra ny kodiarana Ferris. Toy ny kodiarana Ferris maro, tsy mijanona mihitsy izy ary mihodina miadana miadana ka afaka miakatra sy midina ny olona nefa tsy mila fahaizana lehibe. Ireo kapsily voalohany ireo dia nohavaozina tamin'ny 2009.
Satria mariky ny tanàna izy io, na dia rafitra vaovao aza izy io, matetika dia miasa eo ambanin'ny fifanarahana hofan-trano izay miova tanana. Ny tompona vaovao tsirairay dia afaka manova fanovana vitsivitsy izay amin'ny ankapobeny dia misy ifandraisany amin'ny anarana, jiro ary maro hafa. Ohatra, tamin'ny taona 2014 dia niditra tao amin'ny orinasa i Coca Cola ary ny mena no loko natanjaka indrindra rehefa natao ny fanambarana.
Tsidiho ny London Eye
Araka ny nolazaiko tetsy ambony, maharitra antsasak'adiny ny feny manontolo ary manolotra ny fomba fijerin'ny Tower Bridge, Katedraly St. Paul, Big Ben na ny Lapan'i Buckingham, ohatra. Miaraka amin'ny haavo 135 metatra dia ny tena marina dia misy kely dia kely izay tsy tazana.
Mazava ho azy fa ny kodiarana Ferris dia manome mihoatra ny mandeha fotsiny. Alohan'ny hidiranao amin'ny kapsily - gondola azonao iainana a Traikefa 4D izay maharitra efatra minitra fotsiny ary misy ifandraisany amin'ny tantaran'i Londres. 4 D midika hoe fahitana sy feo fa koa fofona sy vokatry ny zavona sy miboiboika.
Ny London Eye dia manana karazan-tapakila roa: ny fidirana mahazatra ary ny fidirana an-tsipika:
Tapakila mahazatra: 34 dolara (eo amin'ny 60 pounds) eo ho eo ny olon-dehibe, 26 ny zaza eo anelanelan'ny 3 ka hatramin'ny 15 taona ary ny zaza latsaky ny telo taona dia maimaim-poana.
Atsipazo ny tsipika: isaky ny olon-dehibe dia mitentina 47 $, isaky ny zaza 90 ary maimaim-poana ihany koa ho an'ny ankizy latsaky ny telo taona.
Ny tapakila dia ahitana ny traikefa 4D. Tokony hamandrika ianao raha vantany vao fantatrao fa handeha ho any Londres ianao satria matetika dia betsaka ny olona. Afaka mividy tapakila an-tserasera ianao. Vantany vao vita ny fandoavam-bola dia alefa aminao ny voucher izay manonta sy manolotra anao eo. Ny zaza latsaky ny 15 taona dia tsy afaka mandeha irery ary na dia izany aza misy ny tapakila ho an'ny sembana ireo tapakila ireo dia tantanana mivantana ao amin'ny biraon'ny boaty.
Afaka mahazo a Fihenam-bidy 15% raha ankoatry ny tapakila Londo Eye dia mividy iray ianao ho an'ny fitsangantsanganana renirano London Eye. Ity sambo fitsangatsanganana ity dia miasa isan'andro isan'andro eo anelanelan'ny 10:45 sy 7:45 hariva. Miasa amin'ny manaraka fandaharam-potoana 2019:
Amin'ny ririnina: ny volana Oktobra hatramin'ny Mey dia manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 8 alina isan'andro. Amin'ny fahavaratra, manomboka amin'ny volana jona ka hatramin'ny septambra, manomboka amin'ny 10 maraina ka hatramin'ny 9 hariva, isan'andro.
Adiresy: Riverside Building, County Hall.
Ahoana ny fomba hahatongavana any: amin'ny fantsom-by, gara Westminster / Embankment na amin'ny lamasinina, Waterllo / Charing Cross.
Manolotra koa ny kodiarana Ferris kapsily manokana izay ahafahanao misakafo na mandany fotoana manokana kokoa miaraka amina vondron'olona iray am-pialan-tsasatra London. Ny zava-drehetra avy amin'ny 625 pounds. Safidy iray hafa dia ny kapsily ho an'ny fianakaviana sy namana amin'ny vidiny 450 pounds sy ny Cupid Capsule Tafiditra ao anatin'izany ny champagne Pommery sy ny sôkôlà truffles izay vidiana eo amin'ny £ 470.
Ary mitohy ny tolotra ... misy ny Kapsule momba ny fanambadiana miaraka amin'ny champagne sy sôkôla koa, manomboka amin'ny £ 490, ny Capsule Fetin'ny tsingerintaona nahaterahana ho an'ny vondrona avy 450 kilao, ny Capsule fampakaram-bady na ny fahafaha-manao tsotra fotsiny misakafo miaraka amin'ny olona fito hafa.
Ka ankehitriny ny kodiarana London Ferris dia fantatra amin'ny anarana hoe Coca-Cola London Eye. Hitanao eo anoloan'ny tranon'ny Parlemanta sy Big Ben, eo amin'ny Thames io. Ao anatin'ny kapsily dia misy torolàlana mifandraika izay mamela anao hitady izay hitanao, izany hoe ireo teboka marika indrindra amin'ny renivohitra anglisy, ary ny zavatra tsara dia amin'ny fiteny maro. Antenaina fa amin'ny andro mazava dia hahafahanao mankafy tontolo manodidina hatramin'ny 40 kilometatra manodidina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Londres » London Eye, ilaina any London
Torapasika Cathedrals any Lugo, Galicia